Umnyaka we-3000 Omdala uMama Tattoo - amaTattoos Iingcamango zobugcisa
Umnyaka we-3000 Omdala uMama Tattoo
sonitattoo Julayi 5, 2016
I-3,000 Unyaka omdala omama wamama wayegutywe kwiimpawu ezifihlakeleyo. Umama, owafumaneka kwidolophana ethi Deir el-Medina, iYiputa, waba ngumfazi owayezikhukhumeza amehlo akhe entanyeni, emagxeni, nasemva, ehlathini, kunye neenkomo esandleni sakhe.
Tattoos entanyeni yomama
Umama wafunyanwa kwidolophana uDeir el-Medina. Qaphela ukuba ezinye iidatto zibonakala kwiso iso, kodwa ezinye ziyingxenye zomzimba eziye zagutywa ngama-resins asetyenziselwa ukumisa.
Ukusebenzisa imifanekiso ye-infrared, umbhali wezinto eziphilayo uGhada Darwish Al-Khafif wayekwazi ukubona le tatto yeenkomo ezimbini, ezimele uthikazikazi uHathor. Kwakhona wayesebenzisa ukulungiswa kwedijithali ukuhlawulela ukuhanjiswa komfanekiso obangelwa ukukhishwa kwesikhumba somama.
I-Anthropologist uGhada Darwish Al-Khafif isebenzisa imifanekiso ye-infrared ukuze ibone i-tattoos kwisikhumba esikonakalisiweyo.
Funda ibali elipheleleyo apha
i-cherry ityatyambotattoo engapheliyotattootattoos kumantombazanatattoos kubantuIintyatyambo zeTattooIndlovu yeendlovutattoosizigulaneicompass tattooi tattooIintliziyo zeTattoostattoostattoos zohlangazinyonitatna tattoosibiniowona mhlobo womhlobotattoo yedayimanitattoos zenyangangesandlaizithunywa zezuluiifatyambo zeentyatyambotattoos zelangaiifoto eziphakamileyozengalo zengalotattoo yamehloiifotto zentamoTattoos zeJometriiipattoosbathanda i tattoostattooukutshiza amathambocute tattoosi-tattoostatto tattoosngombonoiidotiutywala tattoodesign mehnditattoosiimpawu zezodiac zempawutattoos ezinyawoihoi fish tattootatto flower flowerizifuba zesifubaI-Ankle Tattoostattotattooszomculo tattoos